Ny fitenenana hoe Loire châteaux group miaraka amina anarana mpizahatany mitovy anarana amina andiana châteaux frantsay any amin'ny Lohasahan'ny Loire. Ny faritany fantatra amin'ny anarana hoe County of Tours dia niadian-kevitra fatratra teo anelanelan'ny taonjato fahafolo sy ny taonjato fahiraika ambin'ny folo tamin'ny trano feudal of Blés sy ny tranon'i Anjou, fifandonana iray izay narahina tamin'ny taonjato faha-XNUMX sy taonjato fahatelo ambin'ny folo tamin'ny Ady Zato Taona Voalohany. Teo anelanelan'i Frantsa sy Angletera ary teo anelanelan'ny taonjato fahefatra ambin'ny folo sy ny taonjato fahadimy ambin'ny folo tamin'ny ady an-jatony taona faharoa, mbola eo anelanelan'i Frantsa sy Angletera; ireo ady telo ireo dia ho eo am-piandohan'ny ankamaroan'ny tranon'i Loire Valley ankehitriny.
Kastily tafiditra ao amin'ity fonosana ity:
Ity fonosana ity dia noforonin'i legofun1974 sy Archer374